WARBIXIN: Willian, Sanchez, Jorginho & 7-da Xiddig Ee Ay Kooxaha Premier League Kala Hor Qaadeen Daqiiqadihii Ugu Dambaysay. – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 17, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta, Warbixino 0
Kooxda Man City ayaa qorshaynaysa in ay Man United ka afduubato xiddigaha qorshaha ugu jira suuqa kala iibsiga xagaaga.
Tababaraha kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa la rumaysan yahay in uu xiiso u qabo xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Juventus ee Joao Cancelo iyo xiddiga khadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes.
Tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa Cancelo u arka xiddig badal u ah daafaca Antonio Valencia oo isaga tagaya kooxda marka uu dhoco heshiiskiisu.
Laakiin wararka ka imanaya Italy ayaa sheegaya in ay Man City wadahadalo la furtay 24 jirka si ay u keento Etihad inta lagu jiro xagaaga.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa xiddigo iska diiday kooxo premier League ah laakiin ku biiray kooxo ay ku xafiiltamaan isla premier league.
Xagaagii 2013 Willian ayaa ku baasay tijaabada caafimaadka kooxda Tottenham isaga oo 30 milyan ugu biirayay kooxda laakiin chelsea ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ka afduubatay xiddiga.
Man City ayaa maalintii ugu dambaysay ee suuqii xagaaga 2017 ku fashilantay in ay 60 milyan oo euro ku dhamaystiraan saxiixa Alexis Sanchez, Guardiola ayaa doonayay xiddiga suuqii January ee xigay laakiin Man United ayaa soo gadhay tartanka iyaga oo mushaahr 500 kun oo Gini kaga afduubatay kooxda ay jaarka yihiin.
Kooxda Liverpool oo uu wakhtigaas hogaaminayay tababare Brendan Rodgers ayaa u malaysay in ay kooxda MK Dons kala heshiisay saxiixa Dele Alli kadib markii uu tababaruhu la kulmay xiddiga.
Tababarihii hore MK Dons aya xitaa Alli u soo kexeeyay magaalada Liverpool laakiin Tottenham ayaa si lama filaan ah uga afduubatay saxiixa xiddiga reer England.
Kadib markii uu dhaliyay 87 gool 4 sano oo uu la joogay Everton Romelu Lukaku ayaa si weyn loola xiriirinayay kooxda Chelsea xagaagii 2017.
Waxa la fahamsan yahay in ay Blues miiska saartay lacag la mid ah Lacagtii ay Man City ku doonaysay saxiixa xiddiga laakiin Lukaku ayaa doortay in uu Jose Mourinho kula biiro Man United.
Xagaagii hore tababare Pep Guardiola ayaa doonayay xiddig khadka dhexe ee daafaca ah oo uu la tartansiiyo Fernandinho waxana uu liiska xiddigaha uu doonayo ku darsaday Jorginho.
Xiddigii hore ee Napoli ayaa xitaa heshiiska shaqsiga ah la gaadhay Man City iyada oo ay kooxaha Napoli iyo Man City sidoo kale ka heshiiyeen qiimaha xiddiga reer Italy.
Laakiin Chelsea ayaa si lama filaan ah xiddiga uga dul qaaday Man City kadib markii uu Maurizio Sarri oo ay Jorginho soo wada joogeen Napoli loo magacaabay tabaabraha cusub ee chelsea.
Kadib markii uu laba xilli ciyaareed oo cajiib ah ku qaatay Southampton, Luke Shaw ayaa lala xiriirinayay kooxaha ugu waaweyn premier League xagaagii 2014 isaga oo taageere u ahaa kooxda chelsea, Blues ayaa ugu cad-cadayd saxiixa xiddiga laakiin xiddiga ayaa ku biiray Man United kadib markii ay ku soo jiiteen mushahar 100 kun oo Gini ah todobaadkii.
Michy Batshuayi (Chelsea):
Wargayska The Times ayaa sheegayain ay Crystal Palace kooxda Marseille kala heshiisay qiimaha xiddiga reer Belguim laakiin xiddiga ayaa iska diiday in uu ku biiro kooxda Palace taas oo kentay in ay Blues ka hor qaado saxiixa xiddiga todobaad kadibna ku dhawaaqdo saxiixiisa.